नियमित सेक्सले थपिदिन्छ तपाईको सौन्दर्यमा निखार
कार्तिक ७ । रातो गाला, चम्किलो छाला र त्यो गुलाबी रसिलो ओठ, कल्पना गर्नुहोस् यी सबै कुराहरु पाउन पार्लरमा तपाईले कति खर्च गर्नुपर्ला । यति कुराहरु पाउन एउटा महिलाले हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।तर एउटा यस्तो स्वभाविक उपाय छ जसले तपाईलाई सुन्दर देखाउने छ, त्यो पनि फ्रिमा । अध्ययनहरुले देखाएक... जारी राख्नुहोस...
कार्तिक ५ । गर्मी होस वा जाडो सधैंभरी छालाको हेरचाहका लागि आम मानिसको टाउको दुखाइको विषय बन्छ । मौसम परिवर्तनसँगै हाम्रो छालामा पनि विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकाले सधैंभरी छालाको उचित स्याहार गर्नु जरुरी हुन्छ ।छालामा हुने बाहिरी संक्रमणबाट जोगाउन विभिन्न क्रिम तथा औषधिहरुको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।... जारी राख्नुहोस...
सौन्दर्य बढाउने केही उपायहरु
कार्तिक ३ । सधैँ सुन्दर र जवान देखिनका लागि पहिलो सर्त हो, स्वास्थ्य जीवन । शारीरिक रुपमा स्वास्थ्य र तन्दुरुस्त भइयो भने त्यसको प्रभाव अनुहार, छाला, केस सबैमा देखिन्छ । यसका लागि नियमित व्यायम, सन्तुलित खानपान जस्ता कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।यदि सधै सुन्दर, जवान र उर्जावान रहने हो भने योगलाई जीवनश... जारी राख्नुहोस...
कात्तिक २, काठमाडौं । जाडो महिना सुरु भएसँगै बाहिरी वातावरण सुख्खा हुन्छ । हावामा आद्रता कम हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो बाहिरी आवरण अर्थात् छालामा पर्न जान्छ । छाला सुख्खा र फुस्रो हुन थाल्छ । छालाका लागि जाडो मौसम अनुकुल हुँदैन । चिसो मौसममा छालाको उचित हेरविचार नगरे विभिन्न समस्या आउन सक्ने... जारी राख्नुहोस...
एक्सरसाइज र डाइटिङ गर्ने समय छैन? नाे टेन्सन अब यसरी तौल घटाउनुहोस्
कार्तिक १ । मोटो शरीरलाई राम्रो र आकर्षक देखाउनका लागि तौल कम कसरी गर्नेहोला भनेर धेरैले सोचिरहेका हुन्छन् । तर कतिपयसँग कसरत गर्ने फुर्सद हुँदैन ।तर डाक्टरहरूले कसरत नगरेपनि तौल घटाउन सकिनेबारे केही उपायहरू दिएका छन् ।- कडा परिश्रम गर्ने मानिसहरूलाई औसत २२ सय क्यालोरी दैनिक चाहिने गर्छ । तर यदि तपा... जारी राख्नुहोस...
लामो समय सम्म सुन्दर र जवान यी खानेकुरा सेवन गर्नुस्
असाेज २९ । के तपाईँ लामो समयसम्म पनि सुन्दर र जवान देखिन चाहनुहुन्छ? यदि वास्तवमै चाहनुहुन्छ भने खाने गर्नुहोस् यी चिजहरू जसले तपाईँको जवानी र सौन्दर्यतालाई लामो समयसम्म पनि कायमै राख्न मदत गर्छ lअमिलो फलफुलअमला, कागती, सुन्तला लगायतका अमिलो फलफुलको सेवन गर्नाले छालालाई स्वस्थ तथा सुन्दर बनाउनका साथ... जारी राख्नुहोस...
ओठकाे कालोपन यसरी हटाउनुस्
असाेज १४ । अनुहारलाई सुन्दर बनाउने एक महत्वपूर्ण अंग ओठ पनि हो । अनुहारका अन्य भाग राम्रो भए पनि ओठ कुरुप छ भने त्यसलाई सुन्दर मान्न सकिदैन । अथवा सुन्दरतामा निखार ल्याउने प्रमुख अंग ओठ नै हो । कतिपय महिला र पुरुषले ओठको कालोपनबाट निकै समस्या भोगिरहेको बताउँछन् ।ओठको कालोपन लुकाउन महिलाले लिपिस्टिक... जारी राख्नुहोस...
कपालमा चाया परेर हैरान भए यसाे गर्नुस्
असाेज १२ । प्राय धेरैजसो मानिसहरुको समस्या कपालमा चाया पर्नु नै हन्छ । शरिर सफा गरी आकर्षक बनेर हिडे पनि चाया देखिएमा लाज नै हुन्छ । चाया देखिएमा लुकाउन निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ । कपाल सुख्खा हुने वा टाउको चिलाउने भएमा धेरैले तेल लगउने गर्छन् । तर कपालमा चाँया छ भने तेल लगाउदा झन कपाल झार्ने समस्या हुन्... जारी राख्नुहोस...